काठमाडौं महानगरको सूचना- २८ गतेपछि... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
अब काठमाडौंका सडकमा न रुमाल थापेर गीत गाएको भेटिने छ न दुबै मृगौला फेल भएको भन्दै उपचारको गर्न आर्थिक सहयोगको अपिल गरेको सुनिने छ।
बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै वा गाडीमा कोट्याएर पैसा माग्ने पनि हुने छैनन्। किनकी काठमाडौं महानगरपालिकाले मंसिर २८ गतेपछि सडकमा माग्ने भेटिए कारबाही गर्ने जनाएको छ।
मंगलबार सूचना निकाल्दै महानगरले तीन दिनभित्र सबै प्रकारका माग्नेलाई सडकममा नबस्न भनेको हो।
मंसिर २९ मा २५ औं महानगर दिवस मनाउन लागेको महानगरपालिकाले सो अवसरमा विशेष माग्नेरहित काठमाडौं पनि घोषणा गर्ने जनाएको छ। काठमाडौंमा माग्नेको यकिन तथ्यांक नभए पनि ५ सयदेखि एक हजारसम्म रहेको महानगरको अनुमान छ।
बाटोमा अव्यवस्थित रूपमा माग्नेको संख्या बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको महानगरको दाबी छ।
माग्ने वा माग्न प्रोत्साहन गर्ने दुबैलाई कारबाही गर्ने महानगरपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ।
सूचनामा भनेको छ, ‘बाध्यताले सार्वजनिक स्थलमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुन गइरहेकोले पेशेवर रूपमा भिक्षा माग्न र माग्न लगाउन पूर्णतः निषेध गरिको छ।’
महानगरपालिकाले तीन दिनमै सबै सडकका माग्ने हटाउन सक्छ? महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल त्यसको लागि महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको र त्यसले नै माग्नेहरूको व्यवस्थापन गर्ने बताए।
समितिमा महानगरीय प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मानव सेवा आश्रमका कर्मचारी छन्।
महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य भने तीन दिनमा बाटोबाट माग्ने नहटे मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिने बताए।
‘तीन दिनभित्र सडकबाट माग्ने नहटे उनीहरूलाई उद्दार गरेर बालाजुको २२ धाराको एउटा घरमा राखिने योजना छ,’ उनले भने।
उक्त घरमा लगेर वास्तविक असहाय र पेसेवर माग्ने छुट्याउने योजना रहेको उनले सुनाए।
गत वर्ष पनि महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी, मानव सेवा आश्रम र पशुपति क्षेत्र विकास कोष मिलेर पशुपति मन्दिर परिसरमा रहेको माग्नेलाई पनि व्यवस्थापन गरिने बताएको थियो।
त्यतिबेला माग्नेलाई उद्धार गरेर मानव सेवा आश्रममा लग्ने र त्यहाँबाट वास्तविक माग्ने छुट्याउने महानगरको योजना थियो।
योजनाअनुसार माग्नेहरूको व्यवस्थापन गरिए पनि पूर्ण रूपमा पशुपति क्षेत्र माग्नेरहित भने भएको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको यो योजनाले सफल भए अबको केही दिनमै काठमाडौंका सडक माग्नेरहित हुने छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २४, २०७६, ०५:५०:००
भ्यागुताको कोषबाट वैज्ञानिकले बनाए 'जीवित' रोबोट
ओली र प्रचण्डबाट 'रेड कार्ड' पाएकी शिवमाया
धमाधम भत्काइँदैछ पुल्चोक इञ्जिनियरिङ कलेज र जावलाखेल चोकको पर्खाल (तस्बिरहरू)
चेकगणतन्त्रको एक अपाङ्ग हेरविचार केन्द्रमा आगलागी हुँदा कम्तीमा आठ व्यक्तिको मृत्यु
लागुऔषधसहित एकै दिन तीन युवक पक्राउ
गोकर्ण रिसोर्टको जग्गालाई यतिलेभन्दा ५० करोड बढी म तिर्छु, सरकारले दिन्छ?: सांसद रायमाझी
वायुसेवा निगमका अध्यक्ष खरेलले दिए राजीनामा